Dhammaan wixii ku saabsan kirada baabuurta: tilmaamaha, faa'iidooyinka iyo qasaaraha | Ragga Stylish
El gaariga kirada Waxay noqoneysaa fikradda ugufiican ee lagu booqdo meelkasta oo adduunka ah fasax.
Shirkado badan ayaa bixiya adeegyadooda, waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan. Hase yeeshe, qaar baa jira arrimaha muhiimka ah in laga fiirsado.
1 Raaxo ama shaqo darteed
2 Fursado badan oo kirada baabuurta ah
3 Muddo intee le'eg ayaa la kireysanayaa baabuur?
4 Faa'iidooyinka kirada baabuurta
5 Faa’iido darrooyinka kirada gaariga
Raaxo ama shaqo darteed
Markaad kireysaneysid gaari, waa inaad kala saar hadday tahay safar raaxo ama arrimo xirfadeed awgood. Markay shaqada tahay, waxa caadiga ah ayaa ah in gawaarida la xushay ay yihiin nooca Premium, oo leh shirkado muhiim ah oo ficil ahaan aan lahayn liis sugitaan ah sida kiiska kirada baabuurta raaxada ah.
Goorma gaariga waxaa loo baahan yahay ciidaha, sida caadiga ah miisaaniyaduhu way adag yihiin. Socotada iyo dalxiisayaashu waxay doorbidaan inay maal gashadaan lacagtooda goobta, hoteellada, meelaha la booqdo, iwm, halkii ay gaariga ku dhex lahaan lahaayeen. Xaaladahaas oo kale, waxay badanaa u jeedaan dalabyo soo jiidasho leh oo ay bixiyaan noocyo qiimo jaban. Xaalado badan, waxaa jira wax lala yaabo daabacadda wanaagsan ee heshiisyada kirada baabuurta.. Markuu cabbaar sugo hawsha gaadhiga, qandaraasluhu wuxuu heli karaa kaabis, ujro, kharash, caymis dheeraad ah, xannibaadyo, iwm.
Fursado badan oo kirada baabuurta ah
Qiimaha kirada way kala duwanaan karaan inta u dhexeysa maalin ama dhowr maalmood.
Marka lagu daro fikradaha fasaxyada, shirkadaha caymiska qaarkood waxay bixiyaan baabuur beddelaad ah, kaas oo ku jira siyaasadooda.
Ka kaxaynta guryuhu sidoo kale waa xaalado caadi ah oo aan tixgelinno kireysasho gaari, badanaa waasic ah oo waa weyn, sida dhacda gawaarida yar yar.
Xirfadleyda dhexdooda, kirada gawaarida yar yar iyo kuwa xamuulka waa xal caadi ah. Xalalkani waxay fududeeyaan shaqooyinka gaarka ah, xad-dhaafka ama shaqada ugu sareysa, iwm, iyadoon lagu maalgelin helitaanka gaari cusub. Xafiisyada shirkadaha kirada ee kiisaskan badanaa waxay ku yaalliin guryaha warshadaha, si ay ugu fududaato macaamiisha mustaqbalka.
Muddo intee le'eg ayaa la kireysanayaa baabuur?
Muddooyinka ugu badan iyo xilliyada la kireysto baabuur waa inta u dhexeysa maalin, laga bilaabo shan maalmood illaa toddobaad, bil ama xitaa in ka badan bil.
Haddii la go’aansado waqtiyada aad u gaaban, waxaa jira faa'iido darrada kharashyada go'an ee ugu yar in la waajaho. Sameynta daraasadda ku habboon, marka la gaabiyo tirada maalmaha kirada ee gaariga, ayay sare u kacaysaa qiimaha maalintii (celceliska qiimaha, isku-darka kharashyada go'an).
Muddooyinka dheer ma ka faa'iido badan yihiin? Maaha qasab. Shirkaduhu waxay raacaan borotokoolka iska ilaali in isla darawalka, qandaraaslaha, uu gaari kaxeyn karo wax ka badan bil. Waxyaabaha kale maxaa yeelay masaafada ku urursan gaarigaas waxay yareyneysaa qiimaha iibkiisa hadhow.
Shirkadaha kirada baabuurta badanaa waxay cusbooneysiiyaan raxanadooda sanadle ahaan. Sidaa darteed, waxay isku dayaan inay hubiyaan in masaafada uu ku ururay gaari kasta aysan aad u dheereyn, sidaa darteed qiimaha gaariga lama qiimeeyo.
Faa'iidooyinka kirada baabuurta
Waxeey heesataa wadarta xorriyadda dhaqdhaqaaqa, magaalada ama meesha loo socdo safarka. Waqti yar, waxaad ka heli kartaa meesha aad rabto.
In kastoo waddooyinka aan la aqoon, ayaa Gawaarida GPS raadin doonaa waddo aamin ah oo loogu safro magaalada ama waddanka.
Looma baahna in laga walwalo dayactirka gaari. Shirkadda kireysa gaariga ayaa daryeeleysa.
Gaariga la doortay ayaa ku habboon dhadhanka iyo baahiyaha socotada.
Hay'adaha kirada waxay kujiraan wadamada oo dhan. Gaadhi meel kasta waa laga heli karaa.
Faa’iido darrooyinka kirada gaariga
Badanaa way jiraan xadka masaafada u kaxeynta gaariga kirada ah. Marka xadidan la dhaafo, waxay lagama maarmaan noqon doontaa in la bixiyo ganaax, oo ay horay u qeexday hay'adda kiradu.
Baabuurka la kiraystay kama bixi karo xuduudaha dalka kaas oo lagu kireeyay, iyada oo aan oggolaansho hore laga helin shirkadda. Intaas waxaa sii dheer, waa in lagu xisaabtamo in qiimaha shidaalka, laga bilaabo wadan ilaa wadan, uu noqon karo mid aad qaali u ah.
Haddii ay dhacdo waxyeelo dhacdo, noocuu doonaba ha ahaadee, gaariga, shirkada kirada badanaa way kaa qaadaan ciqaabta dayactirka.
Xaalado badan ayaa jira liiska sugitaanka kirada baabuurta. Haddii loo baahan doono taariikho cayiman, waxaa fiican inaad si fiican u sii ballansatid.
Ilaha sawirka: COMOCOCHE.com / Kireysiga gaariga ee darawalka Madrid / Furgobeta
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Kirada baabuurta
Afarta XNUMX-aad ee orodka si ay ugu soo laabtaan jimicsiga qaab ahaan
Akhriso buug dhaqameed mise ebook?